Sawiro – Wasaarada Waxbarashada , Hiddaha & Tacliinta Sare
Archive by category "Sawiro"
Wasiirka waxbarashada Hiddaha iyo Tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho uga qeyb galay munaasabad 38 maxbuus oo dhameysatay dugsiga hose dhexe oo lagu qabtay xabsiga dhexe ee Xamar.
Munaasabada ayaa waxaa joob joog ka ahaa taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliyeed Bashiir Maxamed Jaamac, saraakiil ciidan iyo marti sharaf kale oo lagu casumay .
Maxaabiistan ayaa bartay koombitarka iyo saxaafadda waxa ayna soo bandhigeen aqoontooda ku aadan habka wax loo baray iyo bugaag ay diyaariyeen intii ay xabsiga ku jireen.
Wasiirka waxbarashada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Goodax Bare ayaa munaasabadda ka sheegay siyaasadda iyo aragtida la xiriirto xabsiyada ee dowladda.
“Xabsiga iyo maxbuuska xariirka ka dhaxeya maha xiir aar goosi ah mana ahan xiir qofka lagu ciqaabayo balse waxa uu yahay xiriir qofka bulshadiisa danbi ka galay in lagu saxo la rabo xabsigu maaha meel la isaga aarsado ee waa meesha kaliya ee qofku marka uu bulshadiisa uu danbiga ka galay dib ugu soo laabto uu u noqdo qofka bulshada ugu fiicaan , waxana marqaati ka ah maanta munaasabada ay ku qalin jabinayaa 38 maxbuus oo bartay maa dooyinka koombiitarka iyo saxaafadda taasina waa qeyb kamid ah horumarka dowladda ay gaartay”ayuu yiri wasiirka waxbarashada Soomaaliya.
“Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed dhamaan tood meelkasta oo ay joogaan iyo Hogaankooda wanaagsan oo soo nooleysiiyay kana shaqeysiiyay aragtida xukuumadda jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya waa mid xasuus gaar ah mudan”ayuu intaasi raaciyay wasiir Goodax.
Mudane Cabdulahi Goodax Barre ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan faraxsad u tahay in maxaabista Soomaaliyeed ay wax bartan.
“Ka wasaarad ahaa sigaar ah bey noo taabaneysaa in wax la baro maxaabista Soomaaliyeed danbi kasta ha ku xirnaadaane waxbarashdu waa mida kaliya ee qofku horumar ku gaari karo”ayuu yiri mudane Goodax.
Taliyaha ciidaanka Asluubta Soomaaliyeed Sareeye Guud Bashiir maxamed Jaamac ayaa sheegay inay ka go’an tahay sidii maxaabiista ay u noqon lahayeen dad wax bartay.
Wasaaradda waxbarashada XFS,ayaa tababar ugu furtay Magaalada muqdisho 70 boqol oo maamule.
Wasaaradda waxabarashada Hiddaha iyo Tacliinta sare ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho tababar uga furtay in ka badan 700 oo macalin oo wax ka dhiga iskuullada ku yaalla gobolka Banaadir.
Tabarkaan oo socon doono muddo todobo maalmood ah ayaa lagu baran doono xog aruurinta sanadlaha ah ee iskuullada hoose dhxe sare ee gobolka Banaadir.
Todobada maalmood ee uu socdo tababarkan ayaa maalin walba ka qeyb galaya 100 macalin waxana tababarkan bixinaya xafiiska xog aruurinta iyo tira koobka wasaaradda waxbarashada.
Agaasimaha waaxda qorsheyta Khadiijo Cabdalle jimcaale ayaa sheegtay in tababarkaan uu ku saleysan yahay xog aruurinta sanadlaha ah ee iskuullada gobalka Banaadir iyo sidii leysaga kaashan lahaa sidii macluumad dhab ah looga diyaarin lahaaa sida ay u socoto waxbarashada iskuullada gobalka Banaadir.
Wasiirka waxbarashada Hiddaha iyo Tacliinta Sare Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Goodax Bare ayaa magaaladda Garoowe uga qeyb galay munaasabadda bandhigga Todobaadka Hiddaha, Dhaqanka iyo Aqoonta Jaamacadda Boosaaso, Faraceeda Garowe.
Wasiirka Waxbarashada XFS,Mudane Cabdullaahi Goodax bare ayaa soo dhaweeyay horamarinta bandhigga Todobaadka Hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee lagu qabtay Jaamacadda Boosaaso, Faraceeda Garowe.
Wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada Hiddaha iyo tacliinta Sare ee Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle [jaabir] iyo safiirka dowlada Masar u jooga Soomaaliya Maxamed Ibraahim ayaa maanta kormeeray dugsiga 15 may ee magaalada Muqdisho